Ịmafe si iPhone ka blackberry? Ukwuu! Ị dị mma na-aga na ọhụrụ gị na ekwentị ka anya dị ka ị akwagakwa gị ntọala na data ọhụrụ gị Blackberry Smartphone.
Na-ebufe data gị iPhone gị Blackberry bụ m achọ ịma mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ maka a geek, dị nnọọ ole na ole taps ebe a na-na Job mere. Ma ọ bụrụ na ị bụ ghọgbuo, ọ pụrụ ịbụ a tedious ọrụ dị ka ọ na-agụnye otutu nnyocha ọrụ. Ma echegbula, anyị mere ka ihe dị mfe maka gị. A post bụ otu nkwụsị ngwọta maka niile gị nsogbu metụtara na-ebufe data si iPhone ka Blackberry ekwentị.
Part 1: Common mbipụta banyere ibuga data si iPhone ka Blackberry
Ị nwere ike malitere na Blackberry si inbuilt Ngwaọrụ Gbanye App na-enye gị nyefee data gị iPhone ka a Blackberry na iji Wi-Fi njikọ. Ma nke a inbuilt ngwa nwere inbuilt na-agaghị emeli na ike na-arụ ọrụ maka mmadụ nile. Ọ bụrụ na ị nwere Iweputa Wi-Fi njikọ, ị nwere ike inye ya a na-agbalị, na ọtụtụ n'ime unu ga-ejedebe na ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọzọ nsogbu e depụtara n'okpuru ebe -
1. Ná ngwụsị nyefe bụ ọkara mere ebe ọ bụghị ihe niile nke data na-agafere ọma.
2. Ọ chọrọ Iweputa Wi-Fi njikọ, ọzọ ọ he gị.
3. naanị kọntaktị gị, photos, ncheta na kalenda na-agafere.
4. Ọ bụghị ihe niile nke ozi ịntanetị na-agafere. Ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọzọ nsogbu etịbe na ọ doo ndị email untransferred.
5. Ndi nyefee ozi ederede site na iPhone gị Blackberry.
Ọ bụrụ na ị bụ n'ezie obere nke oge na chọrọ akwagakwa asap mgbe ọ bụla na-eri, ma zere n'elu nsogbu; ahụ na-akpọ Blackberry nnọchiteanya na ọ ga-ya mere n'ihi na ị na a na-eri nke $ 50. Part 2. Free ụzọ: Olee nyefee data si iPhone ka Blackberry
Ọfọn nke a abụghị nanị ihe ngwọta. E nwere ọtụtụ ọrụ gburugburu n'ihi na-ebufe data si iPhone ka Blackberry ekwentị - ụfọdụ na-free na ụfọdụ nwere ike tụrụ ụtụ na a elu ọnụ ọrụ ụgwọ.
Ebe a bụ ụfọdụ nke free ụzọ ụdịdị -
1. Blackberry si ngwaọrụ Gbanye App
Onye mbụ ị ga-agbalị bụ doro anya na ndị Blackberry si inbuilt Ngwaọrụ Gbanye App, nke na-adịghị bụchaghị achọ SIM kaadị na ngwaọrụ ma ị kwesịrị ị na-arụsi ọrụ ike Wi-Fi njikọ Ịntanetị na ma ndị ngwaọrụ.
Ngwaọrụ Gbanye App na-mepụtara "Media ero" a na-atọ ọzọ na-ere maka Blackberry; N'ihi ya e nwere ike inwe a ndakọrịta nke na ole na ole ngwaọrụ, na ike-ewe gị ka square otu, ma ọ bụrụ na Mbugharị bụghị pasent percent ịga nke ọma.
Olee otú iji Blackberry si ngwaọrụ Gbanye App -
1. nbudata Blackberry si ngwaọrụ Gbanye App na ma ndị ngwaọrụ.
2. Open Ngwaọrụ Gbanye App na ma ndị ngwaọrụ.
3. Tinye gị adreesị email gị na-elekọta mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet akaụntụ.
4. Secure ọhụrụ gị Blackberry site mbịne na Blackberry chebe.
5. Tinye PIN na ebe ngwaọrụ.
6. Ma nyefe-ewe ebe.
Ị nwere ike ibudata Blackberry Link na jikọọ na ọhụrụ gị Blackberry ekwentị gị na kọmputa na iji eriri USB na-agafeta music, foto, ozi ịntanetị, si gị iPhone ọhụrụ gị Blackberry n'otu n'otu.
2.1 Lee ndị nzọụkwụ nke na-ebufe music si iPhone ka Blackberry ekwentị
2.1.1 mmekọrịta ndị iPhone na iTunes na kọmputa
2.1.2 Download Blackberry Link na jikọọ na Blackberry ekwentị na kọmputa na enyemaka nke USB.
2.1.3 Mepee Blackberry Link ma nyefee music faịlụ ọhụrụ gị Blackberry ekwentị.
2.2 Lee ndị nzọụkwụ nke na-ebufe foto na vidiyo na Blackberry ekwentị
2.2.1 nyefee gị foto na vidiyo si gị iPhone na kọmputa.
2.2.2 Download Blackberry Link na jikọọ na Blackberry ekwentị na kọmputa na enyemaka nke USB.
2.2.3 Mepee Blackberry Link na pịa na desktọọpụ taabụ.
2.2.4 Navigate site foto na video nchekwa na nyefee dị nchekwa ọhụrụ gị Blackberry ekwentị.
Ma gụọ 2.3 Lee ndị nzọụkwụ nke na-ebufe kọntaktị, ozi ịntanetị na kalenda ọhụrụ gị Blackberry ekwentị
2.3.1 Gaa na Ntọala n'ime ọhụrụ gị Blackberry ngwaọrụ na pịa Accounts
2.3.2 Pịa na Tinye Akaụntụ na ibà gị adreesị email gị na paswọọdụ
2.3.3 kọntaktị gị, ozi ịntanetị na kalenda ntọala ga-amalite na-ebufe si ọhụrụ gị Blackberry ekwentị.
1-pịa ekwentị na ekwentị transfer ngwá ọrụ: Wondershare MobileTrans
Ọ bụrụ na ị na-eche na n'elu nzọụkwụ na-na-ewe oge na tedious na ị ga-agbalị a na-ewu ewu software na-enye gị nyefee ngwa, oku na ndekọ, mgbasa ozi faịlụ, ozi ịntanetị, ederede ozi, kọntaktị, wdg site na otu ekwentị ọzọ. Nke a software-enyere gị aka nyefee ihe niile si ị ochie ekwentị gị ọhụrụ ekwentị enweghị ihe ọ bụla dị ize ndụ ma ọ Nyefe 100% otu faịlụ - mbụ ndị!
Nyefee niile data n'etiti iOS, Android na Symbian ke kiet ke otu click.
100% mma na n'ihe ize ndụ-free
Ndabere ekwentị data na kọmputa na otu click
Weghachi data si iTunes / iCloud / Kies / Blackberry ndabere faịlụ na lossless àgwà
Nkwado maka 3,000+ igwe na dị iche iche netwọk
Ukwuu iṅomi gị iPhone na ihichapu niile ehichapụ data na ochie ekwentị ebe nchekwa
Part 3. Nghoputa: Olee gị mkpa kasị mgbe ebufe data si iPhone
A Quick Nti Survey!
Ihe dị gị mkpa kasị mgbe ebufe data si iPhone ka Blackberry?
1. Ndi ana-akpo
2. Text Ozi
5. ozi ịntanetị
6. Oku dekọọ
9. Ndị ọzọ
Gịnị bụ gị-aza?
Ka anụ anyị na-agụ votu, na ngwa ngwa nyochaa ihe bụ ihe ndị kasị mkpa mpempe data na ekwentị!
> Resource> iPhone> otú nyefee Data si iPhone (iOS) ka Blackberry